မောင် (စွယ်စုံကျမ်း): ခရစ်ယာန်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ အမေးအဖြေ ပြိုင်ပွဲ- ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံ ဖတ်ချင်ရင်
ခရစ်ယာန်နဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာတို့ အမေးအဖြေ ပြိုင်ပွဲ- ကျောက်ကွင်းအရေးတော်ပုံ ဖတ်ချင်ရင်
အပြင်မှာဝယ်လို့ မလွယ်တော့တဲ့ စာအုပ်ပါ အောက်ကလင့်မှာ Down
Download ယူပါ - http://www.mediafire.com/?ကျောက်ကွင်း
Author Anonymous at 12:31:00 PM
Labels: ဖတ်စေချင်တဲ့စာအုပ်တွေ, သခင်မြတ်ဆိုင်, သုတရသစာအုပ်စုံDownloadယူရန်
you are my first blog teacher said...
ဖြစ်ပေါ်လာပုံမှာ ၄င်းရွာလေးတွင် ထမ်းပိုးမညီသော လူကြီးအိမ်တစ်အိမ်ရှိပါသည်။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်မှ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များလာတိုင်း ၄င်းတို့၏အိမ်တွင် တည်းခို ကြကာ ကျွေးမွေးဧည့်ခံရသည့် အကြောင်း တို့ကြောင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးစရိတ်နှင့် ကုန်ကျမှု များ များလာသည့်အတွက် လင်မယားချင်း ဆွေးနွေးပွဲစခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နှစ်ဦးသဘောတူ ၄င်းတို့ရွာမှ ဘုန်းတော်ကြီးနှင့် သင်းအုပ်ဆရာတို့ကို တရားဆွေးနွေး စေခဲ့ပြီး အနိုင်ရ မှန်ကန်သောဖက်သို့ နှစ်ဦးစလုံး ဘာသာပြောင်းမည်ဟု ဆိုပြီး စတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ တဆင့်ပြီးတဆင့် အဖြေမပေါ်ရာမှ တိုင်းသိပြည်သိ ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များပါ ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့ရသည်အထိ ၄င်းရွာလေးတွင် ဖြစ်ခဲ့ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှမပြီးပြတ်ခဲ့ဘဲ ထိုဆွေးနွေးပွဲအကြောင်းကို ရေးသား မှတ်တမ်း တင်ထားသည့် စာအုပ်ကြောင့် ယနေ့တိုင် အငြင်းပွါးနေရဆဲဖြစ်နေပါသည်။
အကိုေ၇ လုပ်ပါအုံး ဒေါင်းလို့မ၇လို့ ဟဲဟဲ
ကျွန်တော်က စာအုပ်ဆို၇င် မနေနိုင်လို့
down လို့မရပါ peteraunggyi1989ကိုပို့ပေးပါလား
Chitthu Lay said...
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျနော့မေးလေးထဲပို့ပေးပါလား thihansoe95@gmail.com
ဗုဒ္ဓဘာသာပဲဖြစ်‌ဖြစ်‌ ခရစ်‌ယာန်‌ပဲဖြစ်‌ဖြစ်‌ ဖတ်‌သင့်‌တဲ့စာအုပ်‌ပါ ကိုယ်‌လိုရာ‌တွေးမဖတ်‌ပဲ
လက်‌ခံသင့်‌တာ‌တွေ သိသင့်‌တာ‌တွေပါတဲ့အတွက်‌ လူပီပီ စဉ်းစား‌ဝေဖန်‌ လက်‌ခံသင့်‌‌သောစာအုပ်‌ပါဗျာ
lat saung said...
sai kyaw said...
ကျေးဇူးပြုပြီး ကျနော့မေးလေးထဲပို့ပေးပါလား saikyawkyawoo.140@gmail.com
wailin aung said...
Could you please provide thatbook to my E.mail 'wailin435@gmail.com.
အ​ပေါ်မှာ လိုက်​ဖာ​နေတဲ့ သူက အူ​ကြောင်​ကြား.. စာအုပ်​ထဲ​ဝေဖန်​ချက်​​တွေကို ​ဆွေး​နေချင်​ရင်​ အချိန်​မ​ရွေးပဲ.. ခရစ်​ယာန်​ ကျမ်းစာက အမြဲတမ်း ပြုပြင်​​နေတယ်​ဆိုတာ အ​ထောက်​အထားအများကြီးရှိတယ်​.. ထာဝရက ဘီလူးသဘက်​လိုဆိုတာလည်း သူတို့ကျမ်းစာမှာ အတိအလင်းပါတာ​တောင်​ ဖင်​ပိတ်​ငြင်း​နေ​သေးတယ်​...
naing thuya said...
Thant Zin Khant said...
IDM နဲ့ဒေါင်းပါခင်ဗျာ အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်
aung gaba said...
​ကျောက်​ကွင်းအ​ရေး​တော်​ပုံစာအုပ်​ငါ့မှာရှိတယ်​ ကွ ငါ့အ​ဖေအရင်​ကဝယ်​ထားတာကိုအမြဲဖတ်​ဖြစ်​တယ်​ အ​ပေါ်က you are my blog teacherဆိုတဲ့အ​ကောင်​ မင်းတို့ ခရစ်​ယာန်​ ကျမ်းစာ​တွေကိုနိုင်​နိုင်​နင်းနင်းပြန်​ဖတ်​လိုက်​အုန်း ငါတိ့ကဗုဒ္ဓ ဘာသာဆိုလို့ မင်းတို့ဘာသာကိုမ​လေ့လာဘူးမထင်​နဲ့. ဘာသာတိုင်း​လေ့လာပြီးမှဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်​တာကွ မင်းလိုခရစ်​ယာန်​ဘာသာတစ်​ခုတည်း​လေ့လာပြီ​တော့မင်းဘာသာကိုဘဲ ​အ​ကောင်းဆုံးလို့မထင်​နဲ့ ငါတို့ဘာသာက မင်းတို့လို ယုံကြည်​မှုနဲ့ချည်းတည်​​ဆောက်​ထားတာမဟုတ်​ဘူး ဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ယုံကြည်​မှုဆိုတာ အ​ခြေခံအဆင့်​ဘဲရှိတယ်​ မင်းတို့ခရစ်​ယာန်​ကျမ်းစာ​တွေထဲမှာ ပါတဲ့အ​ကြောင်းအရာ​တွေနဲ့ ​ကျောက်​ကွင်း​ရေး​တော်​ပုံထဲမှာ​ပြောထားတဲ့ ​အ​ကြောင်းအရာ​တွေကတစ်​ထပ်​ထဲဘဲ ဆရာ​တော်​က စာအုပ်​စာမျက်​နာနဲ့ အတိအကျ​ပြောထားတာ မယုံရင်​ အဲ့ဒီစာမျက်​နှာအတိုင်းရှာကြည့်​ ဆရာ​တော်​က သမ္မာကျမ်းစာကိုင်​ပြီး​ပြောတာ မဟုတ်​ဘူးလား လူတိုင်းကို​ပြောချင်​သလို​ပြောလို့ရတယ်​မထင်​နဲ့